Nin Mareykanka ah oo cimri xarig lagu xukumay - BBC News Somali
Nin Mareykanka ah oo cimri xarig lagu xukumay
8 Agoosto 2015
Image caption James Holmes
Xeer beegta dacwada dhagaysanayay, ayaa ku guul daraysatay in ay isku raacaan cod midaysan in lagu xukumo ninkan dil, sikasta oo ay dib ugu daawadeen cajalad Video ah oo laga duubay goobtii uu dambigu ka dhacay wax yar uun kaddib xasuuqaasi.
Cajaladda fiidiyowga ah waxay tusaysaa maydka dadka dhintay oo dhulka daadsan iyo daangadii ay cunayeen oo dhulka ku qubtay.
Mudadii saddexda bilood ahayd ee ay socotay dacwadan dheer, ayaa waxaa maxkamadda loo sheegay in James Holmes uu shineemada filimada lagu daawado uu saqdiidhexe xoog ku soo galay markaasi oo uu socday filimka uu ajilay ninka caanka ah ee Batman ee lagu magacaabo 'the Dark Knight Rises' isaga oo xidhan dhar wajigiisa qariyay iyo agab jidhkiisa daboola.
Wuxuu ku dhax tuuray dadkii filimka daawanayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Wuxuuna kufuray rasaas ka dhacaysay qoryaha fudfudud iyo baastoolad.
Qaar ka mida dadkii goobta jooogay waxay markii hore uqaateen wax la xidhiidha filimka.
Dacwad oogayaashu waxay ku doodayeen in Holmes uu damacsanaa in uu ku dilo shineemada dhaxdeeda wakhtigaas 400 oo ruux.
Qareennada difaacayay ninkani ayaa ku dooday in James Holmes uuqabay xanuun dhanka dhimirka ah ayna la soo daristay xaalad dhimir la'aan ah xiliga uu weerarka qaadayay.
Laakiin xeer beegta dacwadiisa dhagaysanayay ayaa diiday in uu maskaxda wax ka qabay xilligii doodooda.
Holmes, wuu ka gaabsaday in uu maxkamada horteeda wax ka yiraado si uu isu difaaco ama hadal uu ka sheego oo ku cabbirayo sida uu uga xunyahay wixii dhacay.
Waraysi cajalad fiidiyow lagaga duubay oo maxkamadda dhaxdeeda laga shiday ayuu ku sheegay in uu aaminsan yahay dilidda dadka kale in ay qiimo u kordhinayso noloshiisa dadka dhaawacmayna wuxuu u arkayaa khasaare guud.